William – Page 25 – AsiaApps
Facebook မှာ Tools အသစ်ပါဝင်လာတဲ့အကြောင်းကို Facebook ကိုယ်တိုင်ကပဲ လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်အနည်းအငယ်က ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Tools အသစ်ကတော့ Face Recognition Feature ကိုလုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Face Recognition ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ User တစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာကို…
December 20, 2017 December 20, 2017 WilliamApp NewsNo Comment on Download ဆွဲသူဉီးရေ 10 million ကျော်အထိရောက်ရှိထားတဲ့ YouTube Go!
YouTube Go app ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်မှာပဲ Download ဆွဲသူဉီးရေ 10 million အထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ YouTube Go ဟာ YouTube ရဲ့ data-friendly version တစ်ခုပါ။ နည်းနည်းအနောက်ပြန်လှန်ရမယ်ဆိုရင် YouTube Go…
Message ပို့ပြီးဆက်သွယ်တဲ့နည်းလမ်း ကအခုမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ အရင်ကတည်းကတွင်ကျယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အရင်တုန်းက အနည်းငယ်ခက်ခဲပြီး အခုနောက်ပိုင်းမှ လုပ်ဆောင်ရတာလွယ်ကူလာတာပါ။ အခုဆို Message ပို့ပြီးဆက်သွယ်ရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Application ပေါင်းများစွာရှိနေတာကြောင့်ပိုလို့တောင်လွယ်ကူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ article မှာတော့ Message ပို့ရာမှာလွယ်ကူအဆင်ပြေလောက်တဲ့…
Messenger ဆိုတဲ့ Application ကတော့ Facebook နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး စာပို့ရာမှာအထောက်အကူဖြစ်အောင်အသုံးပြုတဲ့ ကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Messenger ကစာပို့တဲ့ function တင်မကပဲအခြားသော function အချို့ကိုလည်းလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီ article မှာတော့ စာပို့တာအပြင် Messenger…
December 19, 2017 WilliamSmartphone NewsNo Comment on ၂၀၁၈ MWC (Mobile World Congress) မှာထုတ်ဖော်ပြသမယ့် Samsung Galaxy S9
South Korea မှာရှိနေတဲ့ Samsung အမိ Company ကြီးက Samsung Brand ထဲက S series (High-end) Smart Phone အမျိုးအစားကို လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ နောက်ဆုံးအပတ် MWC…
Stranger Things နဲ့ Star Wars တို့အတွက် Google Pixel 2/2XL Camera တို့မှာထွက်ရှိထားတယ့် AR Stickers!
December 19, 2017 WilliamApp NewsNo Comment on Stranger Things နဲ့ Star Wars တို့အတွက် Google Pixel 2/2XL Camera တို့မှာထွက်ရှိထားတယ့် AR Stickers!
Google Pixel2နဲ့ Pixel2XL Camera မှာ Stranger Things နဲ့ Star Wars တို့အတွက် AR(Augmented Reality) Stickers တွေထွက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့…
December 19, 2017 December 19, 2017 WilliamApp News1 Comment on Taylor Swift ရဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Taylor Swift : The Swift Life!
Taylor Swift Fan တွေ Download ဆွဲဖို့သာပြင်ထားပါတော့! ကမ္ဘာကျော် Pop-star တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Taylor Swift ဟာပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှာ “The Swift Life” အမည်ရှိတဲ့…